Madaxweynaha Soomaaliya oo wada qorshe ah inuu kala qaado Duqa magaalada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir
Mogadishu Talaado 4 December 2012 SMC
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe uu ku magacaabayo Duqa magaalada Muqdisho iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo hada ah xil is dul saaran, waxaana qorshahani uu yahay mid uu Madaxweynaha ku doonayo in uu ku qanciyo beelo xilalkii Wasiirnimo ka waayay xukuumadda cusub ee Dr. Cabdi Faarax Shire Saacid.
Sida laga helayo ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu arrintani ku dhaqaaqi doono maalmaha soo socda, iyadoo laga yaabo in ay qaadato mudo, hase ahaatee Madaxweynaha ayaa ka go'an in xilalkani uu kala qaado si loo qanciyo mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ku andacoonaya iney iska dhex arki waayeen Golaha Wasiiradda.
Dhanka kale Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu qorsheynayo in magaalada Muqdisho ay yeelato Gole deegaan oo ka gooban 51 xubnood kuwaasi oo noqon doona kuwo ay soo xulaan Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir ee aan ku imaan qaabka doorashada deegaanka.
Hadii ay dhacdo in Madaxweynaha uu kala qaado xilalka is dul saaran ee Duqa magaalada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa noqon doonta mid ay dad badan dhaliilaan maadaama xilalkaasi ay yihiin kuwo hal ah isla markaana shaqsiga loo magacaabayo uu karti u yeelan kara in uu horumar iyo qabad kusoo kordhin kara Gobolka, hase ahaatee hadii xilalkaasi ay noqdaan kuwo la kala qaado aysan muuqan doonin wax horumar ah iyo wada shaqeyn dhex marta shaqsiyaadka loo kala magacaabayo.
Guddoomiyaha Gobolka ahna Duqa magaalada ee hada Maxamuud Nuur Axmed Tarsan oo magaalada Londan u jooga cusbooneysiin Paassapoorkiisa ayaa la ogeyn in uu wax war ah u haayo arrimahaani socda iyo in kale.
Somaliweyn Web Updating, Somaliweyn Website